PS Vita स्पेन मा आधिकारिक रूपमा बन्द छ ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | कन्सोलहरू, हाम्रो बारेमा
PS Vita सोनीको पोर्टेबल कन्सोल हो, जसले कहिल्यै प्रयोगकर्ताहरूलाई समेट्ने काम समाप्त गर्दैन। कन्सोल छ वर्ष पहिले बिक्री मा गए। यस समयमा छ विश्वव्यापी १ about करोड युनिटहरु बेचियो। उही आंकडा जुन निन्टेन्डो स्विचले एक बर्षमा बेचे यस्तो देखिन्छ कि सोनीले यस परियोजनालाई छोड्दै छ। किनभने कन्सोल स्पेनमा बन्द छ.
यद्यपि कम्पनीले अपेक्षानुसार यो विवरणको माध्यमबाट खुलाएको छैन। प्लेस्टेशन स्पेन को ट्विटर प्रोफाइल थियो PS PS Vita बन्द गरिएको छ भनेर पुष्टि को आरोप मा.
वास्तवमा, यो त्यस्तो समाचार होइन जुन एकदमै छक्कलाग्दो छ। किनभने लामो समयको लागि कन्सोलको लागि उपलब्ध खेलहरूको चयन सीमित छ। त्यहाँ केहि खेलहरू छन्, प्राय: धेरै कम ज्ञात, उपलब्ध छन्। त्यसोभए यो तार्किक छ कि सोनीले यस प्रोजेक्टलाई त्यागे।
नमस्कार! यो प्रभावी ढंगले बन्द छ, हो।
- प्लेस्टेशन स्पेन (@PlayStationES) मार्च 19, 2018
साथै, लगभग करीव एक बर्षको लागि यो स्पेनको स्टोरहरूमा PS Vita पाउन लगभग असम्भव छ। यसको उपलब्धता वास्तवमै सीमित छ। त्यसोभए तपाईंले यस निर्णयलाई कम्पनीबाट आउँदै गरेको देख्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा पहिले नै भएको छ कि केहि। हाम्रो देशमा कन्सोलको अन्त्य पहिले नै वास्तविक छ।
सोनीले आउँदो दिनमा यस निर्णयमा एक विज्ञप्ति जारी गर्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।। PS Vita बन्द गरिएको छ भन्ने पुष्टि भएकोले ट्विटरमा प्रयोगकर्ताहरू बीच एक हलचल मच्चिएको छ। त्यसोभए कम्पनीले यसको बारेमा केहि चाँडै अपेक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस तरीकाबाट, PS Vita स्पेनमा आधिकारिक रूपमा वितरित हुँदैन।। कन्सोल मार्ग सजिलो भएको छैन, न त यो धेरै सफल भएको छ। यस कारणले गर्दा धेरैलाई आशा छ कि चाँडै नै नयाँ बजारहरूमा पनि त्यस्तै हुनेछ। पक्कै पनि यो भइरहेको समाप्त हुन्छ, तर अहिलेको लागि हामीले पर्खनु पर्छ जस्तो देखिन्छ। स्पेनमा कमसेकम हामीले कन्सोललाई अलविदा भन्यौं.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » सोनीले PS Vita लाई आधिकारिक रूपमा स्पेनमा रोक्दछ